BUUG CUSUB: Qarankii Is-Qoorgooyey: Soo If-bixii iyo Dhiciddii Taliskii Siyaad Barre, 1969-1991 | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Arimaha Bulshada BUUG CUSUB: Qarankii Is-Qoorgooyey: Soo If-bixii iyo Dhiciddii Taliskii Siyaad Barre, 1969-1991
BUUG CUSUB: Qarankii Is-Qoorgooyey: Soo If-bixii iyo Dhiciddii Taliskii Siyaad Barre, 1969-1991
Waxaa dhawaan soo baxay buug cusub oo aan ka qoray siyaasaddii, dhaqdhaqaaqii iyo qaab-u-howlgalkii xukunkii militariga ahaa ee uu hoggaaminayey Maxamed Siyaad Barre. Buugga oo ku qoran af-Ingiriisi, waxaa cinwaankiisu yahay The Suicidal State in Somalia: The Rise and Fall of the Siad Barre Regime, 1969-1991 oo macnaheedu yahay Qarankii Is-Qoorgooyey: Soo If-bixii iyo Dhiciddii Taliskii Siyaad Barre, 1969-1991. Waxaa buugga oo ka kooban 382 bog daabacay Madbacadda Jaamacadda Mareykanka ee fadhigeedu yahay gobolka Maryland ee dalka Mareykanka (University Press of America). Waa buuggii labaad oo ku saabsan Soomaaliya ee madbacaddaasi daabacdo illaa sannadkii 1997 oo ay soo saareen buug ka hadlaya burburkii Soomaaliya oo ay qortay Alice Bettis Hashim.
Buuggeyga cusub, wuxuu si cilmi ah u darsayaa dhaawicii Dagaalkii Qaboobaa uu gaarsiiyey dimoqraadiyaddii curdanka ahayd ee Soomaaliya 1960 illaa 1969-kii iyo cawaaqibka ay taasu ku keentay burburkii qarannimadii Soomaaliya. Waxaa buugga u ah ka-baraandeg cilmiyeed xukunkii militariga ee Maxamed Siyaad Barre. Illaa iyo hadda, daraasadda keliya ee laga sameeyey xukunkii militariga waa PhD thesis-ka ku qoran af-Faransiiska ee uu qoray Daniel Compagnon oo cinwaankeedu yahay Ressources Politiques, Régulation Autoritaire et Domination Personnelle en Somalie: Le Régime Siyyad Barre (1969-1991) oo macnaheedu yahay Kheyraadka Siyaasadeed, Xukunka Keli-Taliska iyo Is-Qabsashada Shaqsiga ah ee Soomaaliya: Taliskii Siyaad Baarre (1969-1991).
Dhowr sano ka hor ayaa mutacallimiinta waaweyn ee Daraasaadka Culuunta Afrika waxay billaabeen inay ka doodaan sababta wadammada Afrika ee badankood ay xorriyadda hanteen 1960-kii ka reebay wadammadii kale ee dhiggooda ahaa ee qaaradaha Eeshiya iyo Koonfur Ameerika. Mar allaale markuu gumeysiga ka baxo qaaradda, waxaa saadaashu ahayd in ummadaha Afrika ay dhex maquuran doonaan barwaaqo iyo bashbash. Maxaa u sabab u ah in wadammada Afrika qaarkood, sida Soomaaliya, Liberia, Cote d’Ivoire, Chad, Congo, Sierra Leone, Angola, Mozambique iyo Sudan ay dhex maquurtaan dhiig, dhac iyo halaag. Iyadoo su’aalahaa laga ambaqaadayo, mutacallimiinta waaweyn sida Mahmood Mamdani waxay yiraahdeen waxaa ugu wacan gumeysigii ka kacay oo abuuray qaab-dhismeed qarameed u horseeday colaado. Mutacallimiin kale ayaa soo baxay oo uu ugu horreeyo Achile Mbembe, waxayna ku doodeen dhibaatadu ma ahan gumeysiga ee waa hoggaamiyeyaasha Afrika. Buuggu wuxuu dhex-dhexaadinayaa labadaas mowqif, wuxuuna soo bandhigayaa dooddaas mid u dhow, balse ka yara duwan, oo ah in gumeysigu mas’uuliyaddii maamulka Afrika ku wareejiyey hoggaamiyeyaal Afrikaan ah oo ay ahayd inay iyagu daryeelaan ummaddooda, balse ka doorbiday inay ku dhaqmaan siyaasaddii uu mutacallimka Faransiiska ee daraaseeya Afrika, Jean-Francois Bayart, ku tilmaamay siyaasaddii caloosha (the politics of the belly).
Afkaarta iyo fekradaha uu buuggu xambaarsan yahay waxay ku xiriirsan yihiin doodaha ka socda Daraasaadka Culuunta Afrika ee ay horkacayaan Mamdani iyo Mbembe. Doodda buuggu waxay tahay in hoggaamiyeyaashii militariga ee uu gumeysigu u carbiyey inay dadka u cabburiyaan ay u isticmaaleen xirfaddii loo tababaray inay dadkooda ku gumaadaan. Tusaalaha buuggu farta ku fiiqayo waxaa ka mid ah Mobutu Sese Seko iyo Maxamed Siyaad Barre. Cutubka koowaad ee buugga wuxuu isku dayayaa inuu qaab cusub u jeexo doodda oranaysa wixii Afrika ka qaldamay xorriyaddii kaddib, waxaa gundhig u ahaa qaab-dhismeedkii qarannimo ee uu ka tagay gumeysiga iyo doodda kale ee oranaysa wixii qaldamay waxaa qaldamay hoggaamiyeyaashii Afrika. Si kale haddii loo dhigo, doodda buuggu waxay tahay shaki inuusan ku jirin in gumeysigu musiibo ku ahaa Afrika, laakiin dhaxalkii uu ka tagay gumeysiga mid ka sii weyn waxaa ka tagay hoggaamiyeyaashii militari ee qaaradda Afrika inqilaabka qoriga caaradiis ah ku qabsaday 1960-maadkii, sidii ka dhacday Soomaaliya 21 Oktoobar 1969.
Previous articleOlolaha La Dagaallanka Qaadka oo Muqdisho Dib uga Bilowday
Next articleCadadkii 27aad ee Xaqiiqa Times